CODSI GAAR AH OO KU SOCDA URURKA HAWEENKA GOBOLKA BAY GAAR AHAAN MAGAALADA BAYDHABO
arlaadi March 12, 2017 3 Comments
Walaalayaal sida aad ka war qabtaan naadiga NBB wuxuu laga soo bilaabo 08/01/2017 Gurmad Biyo dhaamin ah ka wadaa magaalada Baydhabo, kaamamka barakacayaasha iyo tuulooyinka u dhow magaalada.
Intii aan ku guda jirnay biyo dhaaminta waxaan aragnay in dadkeena saboolka ah ee abaartu saameysay u baahan yihiin waxyaabo farabadan sida cunto, dhar, maacuun, gogol ay ku seexdaan, bacyaasha laga sameysto cooshashka, daawooyin iwm.
Sidaa darteed waxaa anigoo ku hadlaya magaca naadiga NBB iyo codka maatida saboolka ah si Islaanimo, Soomaalinino iyo walaaltinimo uga codsanayaa in Ururka Haweenka Baydhabo ay naga caawiyaan sidii ay magaalada uga soo aruurin lahaayeen waxyaabahaas aan kor ku soo xusay ee ay u baahan yihiin dadkeena. Ka dibna ku wareejiyaan Guddiga Gurmadka Naadiga NBB iyagoo la xiriiriya walaalaheen Abdalla Shariif Eelaay iyo Bashir Xabashow.
Waxaan idiin ballan qaadeynaa inaan alaabtaas gaarsiino dadka u baahan ee ku nool kaamamka iyo tuulooyinka.
Laf jabtay gun bey dhaxtaal.
Mohamed Nadiir Sheekh
Waxaan halkan ka cadeynayaa naadiga NBB uu qabtey howlo muuqdo oo waxter
Haddii ay ahaan lahayd Afurinta Xiligga Ramadaa iyp qeybinta dhar ciidka caruurta Agoonta ah iyo dhisida Dugsi quraamka
Waxaa kaloo arimaas cheer in NBB si lixaad uga kheyb qaadanaya Gurmadka abaaraha hadda socdo ay kaga jiraan kaalinta kowaad taakuleynta walaalahooda dhiban habeen iyo maalin ay LA garab taagam yihiin kaalmo ban’iaadam ka timid walaalahppda NBB. Waxaan kaloo halkan igu mahad celinayaa Dr Aweys oo hormuud u aha Guushaan ay gaareem NBB
Mohamed maye diidey
Waxaa hubaal ah in dr awes abdi jidle yahay shaqsi ku dayasho mudan walaalkeena sida uu u qaban qaabiyay arintaan taakulaynta dadka dhibaateysan ee abaaraha si baan ugu dhacday walaaliyaal saaxiibayaal waxaan marka hore idin leeyahay aan u duceyno walaalkeena. Dr Aweys Abdi in uu aduunyo iyo Aakhiraba Ilaahey uu siduu je el yahay u yeelo.. Anaga oo dhan in sadaqada ilaahey miisaankii Aakhiro nagu badbaadsho..
Walaaliyaal faanoole fari kama qodna baahida weli waa jirtaa ..ha is dhihin waxaan waa yaryihiin fadlan acounka aakhiro ku rido si ayadoo barakeysan oo badan beri ugu badbaado..
Balanteena waa wada jir iyo wax wada qabad ilaahey dartiisa..
Big suporter NNB
waxan ku farax markan arko aweys Abdi jidle , Bashir xabshow niyadsamida naxariista, iyo dadalka marxadalad kasta u hayo umada reer Baydhabo, hadala iyo hanbalyo wax ma tareeyso ee qofkasta meeshu joogo ha ka soo cawino walalah ay abaraha hayan, ilahayna ha loo baryo in uu umadisa roob iyo nabad u keeno , ilahay asaga owod leh naxaristusna aysan xisabasnen ee alah aan barino oo si niyad aha aan u barino, qofkasta oo reer Baydhabo aha meeshu dunida ka joogo ha ka soo diro waxa uu awoodo, si umadas dhiban loogu gargaro, Bashir xabshow iyo Awaysow iyo inta kalleto hawshan la wada alah idinka abaal mariyo, aduun iyo akhiro.